Azonao omena ahy ve ny seho SEO momba ny laharana?
Alohan'ny zavatra hafa, ny Search Engine Optimization dia dingana iray maharitra sy maharitra izay mikendry ny fahazoana fifamoivoizana be indrindra ho an'ny toerana tsara kokoa ao amin'ny lisitry ny SERPs Google. Mba hanaovana fandaharana SEO ho an'ny tranokalanao dia mila maka antoka isika fa ny zava-drehetra ao amin'ny tranonkalanao dia efa eo an-toerana - manomboka amin'ny votoatin'ny kalitaon'ny tenany, bilaogy manohana ny fampiroboroboana amin'ny aterineto, ny fahitan'ny tranonkala manontolo sy ny fisian'ny aterineto amin'ny media sosialy, sy ny sisa.
Eny, inona no mahatonga ny fijery SEO kokoa? Mino aho fa tokony hifantoka amin'ireto sehatr'asa manaraka ireto ny tranonkala: ny fikarohana sy ny fitenenan-tserasera, ny lohatenim-pejy sy ny famariparitana, ary ny dingana manontolo amin'ny famoronana votoatin'ny pejy tsy manam-paharoa sy ankamantatra amin'ny ankapobeny.Noho izany, andeha hojerentsika ny antsipirihany vitsivitsy izay manao ny fijery SEO rehetra manerana ny SEO rehetra, tsy miraharaha ny lohahevitra ankapobeny, na ny tanjona ara-barotra mety mety isaky ny orinasan-tserasera.
Most commonly, a keyword is observed by the search optimization as the main item showing what your web Ny votoatin'ny pejy dia momba izany. Raha ny fahitako azy, ny mpikaroka mavitrika dia mameno ny teny fanalahidy na ny fehezanteny ho fangatahana ny fikarohana mba hahitana izay ilainy. Noho izany, ny fitaovam-pikarohana lehibe (toa an'i Google mihitsy, Yahoo, na Bing) dia mety ho laharam-pahamehana amin'ny tranokalanao araka ny teny fanalahidy mifandraika amin'ny lohahevitra ambony indrindra,. Ary tonga dia mitandrina - rehefa miasa amin'ny fanatsarana ny tranonkala SEO ianao, aza manadino ny teny fanalahidy. Raha tsy izany, ny sariohatra fitadiavam-bola dia hanasazy anao, fa tsy hanome toerana ambony kokoa ny tranokalanao.
Pejy Titles and Descriptions
Lohateny (a. K. ny. lohan-doha na lohatenin-dahatsoratra) misy famaritana pejy dia singa tena manan-danja amin'ny fikarakarana fikarohana mahomby, tsy lazaina intsony ny fijerena SEO fampidirana SEO. Voalohany indrindra, tokony hitazona ireo mpampiasa mivantana ianao. Amin'izany fomba izany, mila manana ny fizarana tsirairay ao amin'ny tranonkalanao ianao mitondra lohateny malaza sy manintona, miaraka amin'ny famaritana an-tsoratra mazava. Amin'izany fotoana izany, ny fanaovana izany dia hanome ny tranokalanao amin'ny fitomboan'ny aterineto misimisy kokoa, manampy fotsiny ny fitaovam-pitadiavana hitadiavana, "hamaky", ary "hahatakatra" ny votoatin'ny tranonkala ho an'ny fanoratana.
Ny pejy tokana tokana
Aza misafidy ny fotoana sy ezaka eo amin'ny famoronana votoaty tena miavaka sy sarobidy. Tadidio - pejy misy foana ny votoaty. Noho ny antony mahatonga ny SEO ho tsara kokoa mihoatra noho ny lafiny hafa amin'ny fampisehoana ao amin'ny tranonkala. Manoro hevitra aho hampifantoka ny asanao araka ny tokony ho izy amin'ny sasantsasany amin'ireto ohatra maoderina ao amin'ny votoatin'ny pejy tsy manam-paharoa izay nankasitraka an'i Google noho ny fanomezana loka ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana. Noho izany, manolo-kevitra ny fanavaozana ny votoatin'ny pejy misy anao aho amin'ny fandefasana ny lahatsoratra bilaogy farany indrindra, lisitra ambony indrindra amin'ny vokatra na serivisy. Tsarovy fotsiny - ny votoaty sarobidy kokoa dia atomboka ara-potoana, ny fifantohana bebe kokoa handehanana - na avy amin'ny mpitsidika tena misy anao sy ny fitaovam-pikarohana amin'ny fanoroana sy ny tanjon'izy ireo Source .